“Duang Jai Tewaprom” Series ထဲကအတွဲ(၅)တွဲရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း – Taung Gyi
“Duang Jai Tewaprom” Series ထဲကအတွဲ(၅)တွဲရဲ့ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း
“Duang Jai Tewaprom” ဟာThai TV3 ရဲ့big project ဖြစ်ပီးအတွဲ(၅)တွဲနဲ့ဇာတ်လမ်း(၅)ပုဒ်ပါဝင်မှာပါ။ဒီDrama Couple တွေကတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့chemistry ကိုပြသရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Laor Chan
Story ရဲ့part 1 မှာတော့J.T. Center ရဲ့managing director M.L. Phuthanet Jutathep အဖြစ်Gulf Kanawut ကပါဝင်သွားမှာပါ။Gina Yeena ကတော့Phuthanet ရဲ့secretary Laor Chan အဖြစ်ပါဝင်သွားမှာပါ။သူဟာKhun Chai Rachanon (Tanin Manoonsil) နဲ့Sroifah (Taew Natapohn) တို့ရဲ့ပထမဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။
Part2 မှာတော့စစ်ဆရာဝန်M.L. Chat Klao Jutathep အဖြစ်Mike Panithan ကပုံဖော်သွားမှာပါ။သူဟာKhun Chai Puttipat (James Jirayu) နဲ့Krong Kaew (Bella Ranee) တို့ရဲ့ပထမဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။သူကChiang Rai ခရိုင်မှာအလုပ်သွားလုပ်ရင်းအဲဒီနေရာမှာသူမမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့Kwanruthai ဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံမှာပါ။Kwanruthai ဇာတ်ကောင်ကိုတော့Yada Narilya ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
Part3 မှာတော့ဆရာမJai Pisut အဖြစ်Oom Eisaya နဲ့တော်ဝင်guard M.L. Ronachack Jutathep အဖြစ်Tate Myron တို့ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။M.L. Ronachack Jutathep ဟာKhun Chai Ronapee (James Ma) နဲ့Pieng Kwan (Mint Chalida) တို့ရဲ့ပထမဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။
4. Duj Apsorn
Part4 မှာတော့Khun Chai Taratorn (Great Warintorn) နဲ့Mom Luang Raweerumpai (Preem Ranida) တို့ရဲ့ပထမဆုံးသားဖြစ်တဲ့M.L. Asira Jutathep ရဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Mint Ranchrawee ကတော့Wilairampa (Esther Supreeleela) ရဲ့သမီးDuj Apsorn နေရာကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။သူမအမေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရသူမဟာAsira ရဲ့secretary အဖြစ်လျှို့ဝှက်စွာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးပါ။
5. Pon Chiwan
နောက်ဆုံးကတော့Khun Chai Pawornruj (Pope Thanawat) နဲ့Khun Ying Rasa (Mew Nittha) တို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်တဲ့M.L. Saruj Jutathep အဖြစ်Kao Noppakao ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။သူဟာရောမ၊အီတလီကRoyal Thai Embassy မှာfirst secretary အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေသူပါ။အဲဒီနောက်Pon Chiwan နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။Pon Chiwan ဇာတ်ကောင်ကိုတော့PP Punpreedee ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
Previous Article Drama တွေအများကြီးရိုက်ကူးနေရတဲ့Ch3 ရဲ့Raising actress Mint Ranchrawee
Next Article GOT7 အဖွဲ့နဲ့Debut လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသား(၃)ယောက်